थाहा खबर: दशैंमा कहिले पुराना नहुने यी गीत जसले रौनकता थप्छ
दशैंमा कहिले पुराना नहुने यी गीत जसले रौनकता थप्छ
सुन्‍नुस् तपाईलाई मन परेका दशैं गीत
असोज १९, २०७३
काठमाडौं : गीतसंगीतले समाजको चित्रण गरेको हुन्छ । मानवीय व्यवहारमा नै आधारित भएर गीतगाईने हुनाले पनि गीतसंगीत मानव जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । नेपाली संस्कृति अनुसार विभिन्न चाडपर्व दर्शाउने गीतहरु बजारमा आउने गर्छन् । नेपालीहरुको महान चाड बडादशैंका समयमा बज्ने विभिन्न गीतले पर्वको महत्व झनै बढाएका हुन्छन
लक्ष्मी पौडेलको अडियो रिपोर्ट:
यी गितहरू हुदैनन् पुराना
यो गीतमा परदेशी छोराले घरमा रहेकी आमालाई दशैंमा जमरा नछर्न र दहीमा टीका नमुछ्न आग्रह गरेका छन्। श्रीमतीलाई आफू मरेपनि नाडीका चूरा नफुटाउन र सिन्दूर नपुछ्न अनुरोध यो गीतमा छ। दशैंको यो सदबहार गीत रचनाको पछाडि छुट्टै कथा छ। चर्चित सर्जक नारायण रायमाझीका दाइ लक्ष्मण रायमाझी भारतीय सेनामा काम गर्थे। उनी सन् १९९९ मा भारत पाकिस्तानबीच भएको ‘कार्गिल युद्ध’ मा पनि लडेका थिए। त्यही बेला उनले त्यो गीत लेखेका थिए। उनले यो गीत रेर्कड गर्न भाइ नारायण रायमाझीलाई पठाएका थिए। नारायण रायमाझीले यो गीतलाई एकसरो लोकभाकाको रुपमा आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरे। सुरुमा त्यति चर्चा नभएको यो गीत पछि दृष्टिविहीन गायक कृष्णभक्त राइले २०५७ सालमा आधुनिक शैलीमा गाएपछि यो गीतले खुबै चर्चा कमायो।*
मुगलानको ‘दशैं आयो…’
दशैं कि दशा?
वचनैपिच्छे किन यो मेरो टाउको खाएको
दशैं आएको… दशैं आएको…
दशैं पर्वमात्र होइन, यसको आफ्नै अर्थिक महत्व पनि छ। त्यसैले त भनिन्छ दशैं आफ्नो गच्छेअनुसार मनाउनुपर्छ। दशैंमा नयाँ लुगा चाहियो, घर सजावट गर्नैपर्‍यो, खसी र च्यांग्रा ढलाउनैपर्‍यो अनि मान्यजनलाई दानदक्षिणा पनि गर्नैपर्‍यो। योगेश्वर आमात्यले गाएको यो गीत दशैंका यस्तै समस्याका बारेमा छ। आवश्यकता असीमित तर पैसा सीमित। त्यसैले त यो गीतमा घरमुली 'पैसा न सैसा टिकी ट्यास ट्यास!' भन्दै तनाव व्यक्त गर्छन्।
नारायणगोपालको ‘विछोडको पीडा…’
किन आउँछ दशैं तिहार किन बिदा बार
कर्तव्य नै हाम्रो दशैं कर्तव्य तिहार
सबैले दशैं मनाइरहँदा सेना प्रहरी भने घर जान पाउँदैनन्। तन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउन खटिए पनि मन हुन्छ गाउँघरमा। सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर दीपक कोइरालाले लेखेको यो गीतले यस्तै सुरक्षाकर्मीको कथा बोल्छ। यो गीत सशस्त्र प्रहरीको अडियो भिजुअल सेक्सनले निकालेको हो। गीत भन्छ- हामीलाई दशैं तिहार कहिल्यै आएन। सुरक्षा र सेवा नै हाम्रो कर्तव्य हो। परिवारले घर आउ भनेर पत्र पठाउने र लालाबाला बाटो हेर्ने भएपनि मन बुझाउन भन्नुपर्ने गीतका शब्द छन्। घर आउने झिनो आश राख्न अनुरोध गीतमा छ। जगदीश समालले गाएको गीतमा गैरे सुरेशको संगीत छ। यो गीतको संगीत संयोजन प्रदीप श्रेष्ठले गरेका हुन्।
यो दशैंमा घर आउने मन थियो
पापी साहुले दिएन तलब….
सुगमको गीत चर्चामा
वर्षमा दिनमा लै लै हर्षका दिन यी लै लै
दशैं तिहार चाडबाड खुसीले सारा भर्‍यो नि संसार….
रवि श्रेष्ठको शब्दमा रहेको यो गीत सुगम पोखरेलले गाएका हुन्। सुगमकै अभिनय रहेको यो गीत दशैंका बारेमा गाइएका नयाँ गीत मध्ये चर्चित गीत हो। गीतमा सुगमकै संगीत छ। वर्षमा एक चोटी आउने दशैंले रमाइलो ल्याउने र निधारमा टीका अनि कानमा जमरा भएपनि विदेशमा रहेका नेपालीका आँखामा आँशु हुने कुरा गीतमा छ।
दशैं आयो, खाउँला पिउँला…
जीवनको ‘यसपाला त यस्तै भो आमा…’
‘दाइ त मेरो लाहुर जाने, म बैनी त सम्झेरै रोइरहने’ बोलको गीत पनि दशैं तिहारकै बारेमा सम्बन्धित छ। ‘दशैं आउला तिहार आउला निधारमा को टिका लगाउला?...’ गीतमा बहिनीको दाजुलाई प्रश्न छ। ‘दशैं आउँदा तिहार आउँदा घर सम्झि मै फर्की आउँला…’दाजुको जवाफ छ।